Hutano, 13 Zvita 2018
China 13 Zvita 2018
Vamwe vatungamiriri kuLupane mudunhu reMatabeleland North province vari kutora matanho ekudzivirira rusarura pakugoverwa kwerubatsiro rwechikafu nezvekurimisa pachishandiswa zvematongerwo enyika.
Vadzidzisi Vanoti Zvimhingamupini Hazvivatadzisi Kupedza Rwendo Rwavo
Vadzidzisi vesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, vapinda muzuva rechina vachifamba netsoka kubva kwaMutare vachienda kuHarare chinangwa chavo chiri chekunosvitsa zvichemo zvavo kuhurumende.
Zvita 12, 2018
Vanachiremba vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara huye havasi kuzodzokera kumabasa kusvika hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo.
Zvita 11, 2018
Vagari Vozeya Mashandisirwo eBhajeti reGuta reMutare
Kanzuru yeguta reMutare inoti ichashandisamari inosvika mamiriyoni makumi mana nemaviri emadhora mubhajeti rayo regore rinouya.
Zvita 08, 2018
ZCTU Yoronga Kuratidzira Kune Mutsindo Munyika Yose
Sangano rinomiririra vashandi, reZimbabwe Congress of trade unions, ZCTU, rinoti ririkuronga nemadzisahwira aro kuratidzira kunotyisa munyika yose senzira yekuratidza hurumende zvinyunyuto zvaro.
Professor Makhurane Vanovigwa Kumusha Kwavo kuGwanda
Nyanzi munyaya dzedzidzo, uye vari vaimbove mukuru wechikoro cheNational University of Science and Technology, NUST, Professor Phineas Makhurane, varadzikwa zvine mutsindo kumusha kwavo munzvimbo yavakaberekerwa yeGungwe kuGwanda mudunhu reMatabeleland South.
Zvita 07, 2018
Vatori veNhau Vokurudzirwa Kunzwisisa Matambudziko eVanhu Vakaremara
Vakaremara vanoti vatori venhau vanofanirwa kuve neruzivo rwakakwana pamusoro pehurema kuitira kuti vakwanise kunyatsonyora pamusoro penyaya dzevakaremara vane dambudziko reHIV/AIDS.
Mapurisa Ochengetedza Migwagwa Kutanga Svondo Rinouya
Hurumende yazivisa kuti mapurisa achanga ari mumigwagwa aine chinangwa chekudzivirira tsaona. Izvi zviri kutanga svondo rinouya.
Hurumende Yokurudzirwa Kugadzirisa Matambudziko Azere Muzvipatara
Matambudziko munyaya dzezvehutano munyika ari kuramba achiwedzera zvichitevera kuramwawo mabasa kwevanoshanda kunotorwa mifananidzo yema X-ray kutanga nemusi weChina.
Delta Yopererwa neMari yeKugadzira Coca Cola neZvimwe Zviniwa Nyika Yatarisana neKisimusi
Kambani yeDelta inoti yave nemavhiki maviri isingagadzire zvinwiwa zvakaita seCoca Cola nekuda kwekushaya mari yekunze yekushandisa kubva hurumende zvayachinja mutemo wekuwana mari kwemakambani kubva kumabhanga nekuReserve Bank of Zimbabwe
Zvita 05, 2018
Kushaikwa kweMari yeKunze Munyika Kwoita Kuti Mishonga Itengeswe neMari yeKunze
Sangano remakambani anotengesa mishonga yekurapa vanhu, rePharmaceutical Society of Zimbabwe, rinoti kushaikwa kwemari yekunze ndiko kwave kukonzera kuti vatengese mishonga nemari yekunze kwenyika.
Vaimbove Mutungamiri weAmerica Va George H.W.Bush Vorangarirwa muWashington DC
VaBush vakaita mutungamiri weAmerica kubva muna 1989 kusvika 1993, mushure mekunge vamboita mutevedzeri wemutungamiri wenyika panguva iyo VaRonald Reagan vaive mutungamiri weAmerica.